Oduu Waraana Bilisummaa Oromoo irraa
Adoolessa 28, 2020
Guyyaa har’aa Adoolessa Jul/28/2020.
Ganama har’aa RGB PP maqaa WBO sakatta’uutiin karaa Maaxaa Taabor bobbatee turte. Hata’u malee Gaachana Uummata Oromoo kan ta’e WBO GOOFTAAN DIINAA dursee haxxee hidhee
Amma kunoo reeffaafi madoo ishee Konkolaataa ISUZU, 3F 2 fi Oraaliitti guurtee
Iyyaa gara Hospitaala Walii-galaa Dambi Dollootti fiigaa dabarteetti.
Sakatta’uuf bahanii sakattamuunis jira!!!!!
Gumaa ilmaan Oromoo WBO GOOFTAAN
DIINAA Baasuu itti fufeera.!!!!
Uummati of-eeggannoon socho’uu feessisa
sababaan immoo aarii isinitti bahuu malti
waan taheef yaa Oromookoo.
Qilleensa irra nuuf oolchi!!!
Injifannoo WBO Zoonii Kibbaa
Guyyaan kaleessaa WBO ZKf guyyaa injifannoo ti. Haaluma kanaan WBOn ZK Cibiraa Sodom Booroo lola ganama kakeessaa 27 /07 / 2020 aanaa Gumii_Eldalloo Ganda boobaa bakka addaa Goda ookkoo ti tarkaanfii waraana mootummaa gabroonfataa koloneer Abiyyi irratti fudhateen injifannoo mirqaansaa galmeessuun loltuu gabroonfataa 21 ajjeesee 27 ol madoo taasisee qawwee AKM 8 hidhannoo guutuu fi mi’oota waraana gargaraa booji’uun, waraana gabroofataa baargee faca’e hanga sa’aa 6 :00pmti WBO sakata’aa akka jiru hubatamee jira. itti baha isaas akkuma nu dhaqabeen isin biraan geenya
Injifannoo WBO cibiraa sodom booroo 27 /07 / 2020
Gootiichi WBO zoonii kibbaa godiina Gujii bahaa humna addaa cibiraa sodom booroo tarkaanfii halee waraana goolesituu mootummaa shiftaa itiyoophiyaa koloneer Abiyi Ahimad kaampii aanaa Gumii_Eldalloo Ganda boobaa ollaa Tuulitti irraa guyyaa hari’aa (27/07/2020) WBO loluuf bobba’ee bakka addaa Goda ookkoo jedhamutti WBOn dursee dhaga’ee itti qophaa’uun tarkaanfii haleellaa ganama suphii lola sa’aa 06:40 Am hanga sa’aa 8:00Amti gageessaan, waraana gabroomfataa gaantaa 2 baayyinni lolituu 60 lolaaf bobbaafam WBO humnni addaa cibiraa sodom booroo haleellaa bakakkaa itti roobiseen lolituu mootummaa badii irratti injifannoo cululuuqaa galeemeesseen guutumaaguutuutti barbadeesse, lolituun 7 qofaan kan keessaa ce’e ta’uun hubatamee jira. Hanga ammaatti ummata naannichaa itti bobbaaftee reefaa12 fi madoo 15 qofaa ummati akka walitti qabe hubatame jira. Waraanni gabroofataa birmannaaf bobba’es baargee gargar faca’uun isaa bararamee jira. odeefannoo guutuu akkuma nu dhaqabeen isin biraan geenya.
I U Of
Adoolessa 27 /2020
Irree fi gachaana ummata oromoo wbon ZK godiina Gujii bahaa keessa socho’u guyyaa 24 / 07 / 2020 godiina Gujii bahaa aanaa Gooroo Adoolaa ganda Dhakaa laancha ti waraana mootummaa gabroonfataa koloneer Abiyyi ummata oromoo hiraarsuu bobba’e irratti tarkaanfii fudhateen lolituu gabroofataa irraa 4 ajjeesee 7 madoo taasiise. Akkasumas guyyaa 26 /07 / 2020 aanaa Gooroo Adoolaa ganda mucoo jedhamtuutti tarkaanfii waraana goolesituu mootummaa shiftaa kanarratti tarkaanfii fudhateen 3 ajjeesee 5 madoo taasisuun injifannoo galmeessee jira.
Adoolessa 26 /2020
Previous articleLubbuun hoganootaa fi jaallan keenyaa dorgommii qumaarri siyaasaa ittiin xabatamu miti
Next articleEthiopia’s volatile path to democracy
Emmanuel July 28, 2020 At 11:50 am
Injifannoon WBO garaa nama gaha.
Burqa Lemesa July 29, 2020 At 11:24 am
Oromon lafa isaa irattii afaan Oromo tiin dubachuu qaba,lAFA oROMO IRATTII fINFIINE QABATEE AFFAN amhara tiin dubachuun orkadhaa.Dachee Oromotii Afaan Oromo qofa dubatama.
”systemiin” fedrala akka jiirutti saba amhara,afaan amhara,amanta chiristana tajajiila.
Qabson Oromo systemnii fedrala Oromo akka tajajiilu,afaan oromo fi amanta oromoo akka tajajiilugochuf qabsofnaa.kara hambiira Angoon federal OROMON AKKA BULCHUU,DINGDEE ETHIOPIA HARKA oROMO AKAA TA’UUF QABSOOFNA.HINJIFANOON HAN SABA BALA OROMOTII HINSHAKIINU.
burqa lemesa July 30, 2020 At 7:13 am
Lafa Oromo irratii Fiinfiinettii neftenyaan mana fedrala ijaratee nutiiqabsyuutii jirtii kanafuu finfiinetii konkolataan akka gallefii akka banee hognee mana hidhaa jala galttii.
waltajii 29/7/20 mumen ministera warapartii mormitota fana godee hanhiimu,akka sodatetii fii kalatii qabsoo jala badetii assaya ture.mume ministera fi argamtuu mume minstera waltii busuttin manuma saniidigamura jiraa injiifannon han oromo tii.